Okusanda duck izidumbu kuqabukela kutholakale esitolo emashalofini. Lokhu inyama obucayi ezibalulekile ngendlela engenabulungisa egqwalile ubala uma kuqhathaniswa inkukhu ethandwa. Noma kunjalo, kukhona abantu, kuphambene umbono womphakathi, uthanda lo mkhiqizo eziwusizo ngendlela emangalisayo futhi ezihlwabusayo kakhulu. Njenganoma iyiphi enye inyama yenkukhu, kungaba Fry, thumba, amakhekhe noma intuthu. Konke kuncike izifiso iresiphi ekhethiwe. Indlela elula ukucubungula - it is ukupheka. Kodwa kunjalo elula cha. Ngaphambi kokuba uqale ukusebenza, kubalulekile ukwazi kahle kanjani futhi kangakanani ukupheka nedada. Kule ndaba, zikhona amaphuzu amaningana ukuthi udinga ukukhuluma kabanzi.
Main inqubo izinyathelo
Duck ngokuvamile abilisiwe isobho, amasaladi ezahlukene, futhi izitsha ashisayo nabandayo. Ungakhohlwa ukuthi lo mkhiqizo has a iphunga othize futhi ukunambitheka esiyingqayizivele. Ukuze ukumosha isidlo, kudingeka wazi kusengaphambili indlela ukupheka nedada. Phela, nganoma isiphi isiphambeko enqubeni ungaba nomthelela ongemuhle izinga umkhiqizo osuphelile. Okokuqala kuyafaneleka ukuthi ngaphezu anda ikhalori inyama futhi ezikhuluphele kakhulu. Empeleni, lo akuphazamisi kangakanani ukupheka nedada.
Ngokwezinga elikhulu leli qiniso elithinta imithetho yokufeza ukwenza inqubo enjalo. Zonke izenzo kumelwe kwenziwe ngokulandelana:
Okokuqala, isidumbu kumele uthele amanzi abandayo. Uma umkhiqizo buhlangene, kumele inikezwe isikhathi iqhwa elisenyameni.
Ngemva kwalokho kudingeka ukuba duck esiswini, ukususa izibilini. Ngesikhathi esifanayo kubalulekile ukuba nginqume ekhona imali fat, okuyinto baningi ikakhulukazi emuva, eduze umsila.
Uma kudingeka, isidumbu zingahlukaniswa zibe izingxenye ngokushesha.
Amanzi imbiza ngamathumba.
Yenza umlilo ezincane bese wengeza 10 amagremu kasawoti, amahlamvu bay, wonke u-anyanisi, izaqathe, oqoshiwe zibe nezixhobo ezinkulu, amahlamvu basil kanye ambalwa uphizi emnyama.
Beka amanzi abilayo inyama kanye nekhava imbiza.
Isikhathi ukupheka incike kundlela odinga ngayo lelo umkhiqizo itholakala. Ukuze wonke isidumbu kuyodingeka okungenani eyodwa ihora nesigamu. Uma ebhodweni kukhona izingcezu inyama, kwanele ukuba imizuzu 40-50.
Ukwazi indlela ukupheka duck, ungakwazi cishe abale isikhathi lapho usungaqala ukubhekana dish side, noma enye izithako ze inkambo main.
Abaningi bakholelwa isidlo isobho, okuyinto ngempela kufanele kufakwe ekudleni nsuku zonke ngamunye. Ukuze wenze lokho, ungasebenzisa noma yikuphi inyama, yenkukhu ngisho kwasolwandle. Duck kulesi simo kungaba ekahle yokuphila kulabo. Wakhe obomvu nonsundu inyama obucayi unika isidlo flavour ekhethekile futhi iphunga esiyingqayizivele. Ukuze wenze izinto ezilungile, kufanele siqonde kuqala ukuthi indlela ukupheka isobho nedada. Lo mbuzo akakubekezeleli eseduze. Yiqiniso, kungenzeka ukuba athathe isinyathelo, njengoba besho, ukuze iso. Kodwa kungcono ezimweni ezinjalo ukuba umqondo ocacile.
Noma yimuphi wekhaya uyazi ukuthi izinkukhu inyama kungenziwa abilisiwe ngezindlela ezimbili:
pre-ukukucaza kube izingxenye.
Lapha, wonke umuntu uyazinqumela ayenakho indlela okufanele kwenziwe kangcono. Uma sikhuluma duck inyama, esimweni sokuqala kuyodingeka ubekezele. Ngakho indlela ukupheka duck isobho? izinyoni lonke ngokwemvelo tidzinga sikhatsi lesinyenti. Kuzothatha eyodwa nengxenye, noma ngisho amahora amabili, kuze kube inyama ufinyelela esimweni oyifunayo. Ukuze izingcezu ngabanye isikhathi udinga encane kakhulu. Kuye ngobukhulu babo kungadinga 40 imizuzu ngezinye izikhathi ngisho isigamu sehora kwanele ukuze bakwazi ukuqala ukwethula izithako asele. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi ukupheka ungakhohlwa ususe Foam nokuhlanza kwenzekani kobuso amafutha.
Ukuze imenyu yezingane
inyama Duck iqukethe semali ephezulu ukuncibilika amafutha okuyinto okunzima ukugaya umzimba. Ngakho-ke, it is hhayi Kunconywa izingane ngaphansi kweminyaka emithathu ubudala futhi abantu baphathwa izifo ezihlukahlukene pheshana emathunjini. Izingane ezindadlana kuwo singakwazi ukupheka isobho omuhle. Indishi kuvela, hhayi kuphela elimnandi futhi okunomsoco, kodwa futhi okunomsoco kakhulu. Ngisho izinto eziningi ezincane, inikeza supply amandla usuku lonke.
Lapha njalo umama lo mbuzo uphakanyiswa ukufunda: indlela ukupheka duck isobho ingane? Impendulo yalo itholakala kakhulu inqubo ubuchwepheshe:
Inyama uzodinga impela kancane. Ngomqondo onabile, nenxenye ezimbili amalitha amanzi kwanele 200 amagremu. Oku-ke kudingekile ukulungisa umhluzi. Ukuze wenze lokhu udinga iqatha lenyama 2:00 imizuzu phezu ukushisa ongaphakeme. Futhi ungakhohlwa ukuthi umhluzi wokuqala okufanele likhanyelwe.
Ngemva kwalokho kudingeka ukubeka inyama ohlangothini olulodwa, futhi uketshezi isetshenziswa njengoba isisekelo isobho egcwele. Kancane kancane, ngesikhathi abilayo umhluzi ezidingekayo yanjalo engeza imifino ezahlukene (amazambane, u-anyanisi kanye izaqathe), ungakhohlwa kubo ngesikhathi esifanayo ngangokunokwenzeka ukuze akuqede.
Uma zonke izithako kakade ebhodweni, kukhona ungakwazi ukufaka inyama. Kufanele futhi uthathe yizicucu amancane.
isobho Eminye abilisiwe ngendlela ezivamile. inyama Oku-kusetshenzwe akusadingi iyiphi ukupheka ekhethekile eside. Uma imifino noma kwengezwe okusanhlamvu uzolunga, umlilo kungacinywa, futhi isobho - ukuze uthele endishini ukondla izingane zabo.
Imigomo duck ngabhema
Labo abangakaze babhekane nayo ngibhema ekhaya, mhlawumbe awazi ukuthi nale nqubo inyama kungaba pre-thumba. Lokhu kwenziwa ukuze ekugcineni Kwatholakala ethambile nokuningi ithenda.
Ngomqondo onabile, konke silula:
inyoni Okokuqala, njengenjwayelo, kufanele kahle ukugeza igqamuka.
Ngemva kwalokho, qiniseka ukuthi usike kusukela umsila isidumbu nentamo, njengoba ilapha aqoqana fat ngokweqile.
Okulandelayo, kufanele duck olungiselelwe uthathe yizicucu eziningana ezinkulu.
Khona-ke inyama kufanele ihlale amahora 12 marinade ehlanganisa nosawoti kanye nezinongo ezahlukene (pepper, oregano, rosemary Thyme). Ungasebenzisa futhi isethi lakho siqu zamakha.
Isinyathelo wokugcina iyona esigabeni kwangaphambilini - ukupheka. Futhi inyama iphekwe hhayi amanzi, futhi amanzi okugqumisa efanayo. Indlela ukupheka duck ngaphambi ukubhema? Ngemva abilayo, uketshezi luyoba olwanele 20 imizuzu.
Khona-ke lo duck kufanele kube ilungelo epholile ngo umhluzi. Kungaleso sikhathi kuphela lapho kungaba zithunyelwe Smokehouse.
Kuyini urolithiasis: Izimpawu kanye nokwelashwa isifo sezinso
Indlela yokuqasha abaqashile eNtshonalanga yamaTanks?